पैसा कमाउने केही टिप्सहरुः जसले तपाईंलाई रातारात बनाउने छ करोडपती – Khula kura
पैसाको आवश्यकता सबैलाई पर्छ । अनि संसारमा सबैको चाहना हुन्छ कसरी धेरै पैसा कमाउने ? अझ हाम्रो समाजमा त पैसा कमाउन सकेन भने उसलाई असफलको संज्ञा दिइन्छ । त्यसैले हरेकले पैसा कमाउने जुक्ति खोजिरहका हुन्छन् । यहाँ हामीले केही तथ्य उल्लेख गरेका छौं । जुन फलो गर्नु भयो भने पैसा कमाउन सहज हुनेछ । यस्ता छन् पैसा कमाउने तरिका :
आफूलाई चाहिने कुरा मात्र किन्नुस् । जे किन्दा पनि अत्यन्त आवश्यक छन् कि छैनन् भनी विचार गर्नुपर्छ । केही नयाँ कुरा सिक्नुस् । आफूसँग भएका क्षमता तिखार्नुस् । यसरी नयाँ कुरा सिकेपछि तपाईंले पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ । मानौं तपाईंले चित्रकला सिक्नुभयो रे, त्यो बेचेर पैसा आउँछ । आजकल सामाजिक सञ्जालबाट पैसा कमाउन सकिन्छ । आफ्नै युट्युब च्यानल खोल्नुस् र क्रिएटिभ भिडियो अपलोड गरेर मोनेटाइज गर्नुस् । तपाईं प्रसिद्ध पनि हुनुहुनेछ अनि धनी पनि ।
घरमा भएका पुराना सामान बेचिदिनुस् । घर भरिने गरी सामान थुपार्नुको के अर्थ ? सामान बेच्दा पैसा पनि हुने, घर पनि सुन्दर देखिने । कमाइभन्दा कम खर्च गर्नुस् । आमदानी अठन्नी, खर्चा रुपैयाँ गरेर काम छैन । क्रेडिट कार्डको लत जति छिटो छुट्यो, त्यति राम्रो । वर्षैपिच्छे तलब बढ्ला भनेर आश गर्नुभयो भने तपाईं कहिल्यै धनी हुन सक्नुहुन्न । त्यसैले राम्रो तलब दिने जागिरको खोजी गर्दै अफिस छिटोछिटो बदल्नुस् ।
चुइंगम भनेर साथीले यौ’ न उ’त्ते’ जना बढाउने औषधि खुवैदिएछ त्यसपछि त….पूरा पढ्नुहोला